: at 4/21/2010 07:28:00 PM
ဖွားကိတယောက် နုနယ် လှပ လတ်ဆတ် သန်မြန်စဉ် အခါကပေါ့ ။ ဆူပါအိုင်ဒေါ မဖြစ်တော့လည်း ဆူပါမော်ဒယ်လေးများ ဖြစ်လိမ့် နိုးနိုး နဲ့မျှော်လင့်နေမိသေးတယ် ။ ဒီတော့ ကြောင်လမ်းလျှောက်ခြင်း အကြောင်း တွေးမိ ငေးမိ ကြည့်မိ တာတွေလည်း ရှိသပေါ့လေ ။ ဪ ...ဘာလို့ များ လူဖြစ်ပြီး ကြောင်လို လမ်းလျှောက်ချင်နေကြပါလိမ့်ပေါ့ နော် ။ ဒီလူတွေများ တယ် ခက်သကိုး ။ ဥူးသုမင်္ဂလ တရား တပုဒ်ထဲမှာ ကြားယူမိတာ ကတော့ လူတွေက သူတို့ ကို ဒါရိုက်ကြီး ဟဲ့ခွေးမ ၊ ဟဲ့ ဝက်မ စသဖြင့် တိရစ္ဆာန် တကောင်ကောင် နဲ့နှိုင်းပြောလိုက်ရင် အင်မတန်မှ စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်တတ်ကြပါသတဲ့ ။ ဒါပေမဲ့အို မိန်းကလေး ရယ် ၊မင်းရဲ့ “ ဇင်ယော်တောင် မျက်ခုန်းမွှေးလေး” ကသိပ်လှပါလား လို့ဆိုတဲ့ အခါများကျ သဘောခွေ့မနောခွေ့ဖြစ်တတ်ပါသတဲ့ ။“ ပုတုန်းရောင်ကေသာ ”တို့။“ သမင် မျက်လုံး” “လမ်းလျှောက်ပုံက ဆင်မ ယဉ်သာ ဟန်ကလေး ” စသဖြင့် တင်စားပြီး ပြောတဲ့အခါ ဒီ တိရစ္ဆာန်တွေ နဲ့နှိုင်းတယ်လို့ မထင်မိပဲ ကျေနပ်နေကြပါသတဲ့ ။ လူ့ မနောများ မှန်းရတယ်ခက်တာပဲ ။
ခုလည်းကြည့် လေ ။ ကြောင်လမ်းလျှောက်ခြင်း နည်း တဲ့ ။ ဘာလို့များ ကြောင်လို လမ်းလျှောက်ကြတာပါလိမ့် ။ လူဖြစ်ပြီး လူလို မလျှောက်ချင်ကြတာ ။ ဒီနည်း လေး နဲ့ အဆင်ပြေပြေ လျှောက်တတ်ရင် ။ အရပ်ကလေး မြင့်ရင် ။ ကြည့်ပျော်ရှုပျော် ရုပ်ရည်ရှိရင် ၊ နာမည် သာ ကြီးသွားကြည့် ။ စားမကုန် သောက်မကုန် ၊ သောက်သောက်လဲ ဝင်လိုက်မဲ့ငွေတွေ မနည်း မနော မို့လူတွေက ကြောင်လိုလမ်းလျှောက်တတ်ချင် ကြပါတယ် ။ အဟက်.. တလွဲ မထင်ပါနဲ့၊ မြန်မာစာ မြန်မာစကား ရေးချင် လွန်းလို့မြန်မာလိုပဲ ရေးချလိုက်တာ ။ ဖတ်ရတာ ခိုးလို့ ခုလုကြီးဆိုရင်တော့ ဘိုလိုက ဒီလို ရေးထားပါတယ် ။
CAT WALK တဲ့ ။“ Catwalk floor isanarrow, usually elevated platform used by models to demonstrate clothing and accessories duringafashion show ”. လို့ဆိုထားတော့ ...ဖက်ရှင် ပြပွဲမှာ မော်ဒယ်လေးများ ၊ လှပဆန်းသစ် ဝတ်စားဆင်ယဉ်ပြီး လမ်းတက်လျှောက်ပြရတဲ့ စင်မြင့် ကျဉ်းကျဉ်းလေး ပေါ့ ။
ကြောင်လို အဆင်ပြေပြေ လျှောက်ဖို့ လည်း တယ် မလွယ်လှပေဘူး ။ လေ့ကျင့်ရတာတွေ အတော်ပင်ပန်းတယ် ဆိုပဲ ။ ပြီးတော့လည်း အဆင် မသင့် တဲ့အခါ ဒီလိုလေးတွေ ဖြစ်တတ်သေးလို့၊ ခါးချိနေတဲ့ ဖွားကိ တယောက် ကြောင်လမ်းလျှောက်နည်း မသင်လို တော့ပါ ။ ကြောင်လို မလျှောက်လိုတော့ပါ ဟု ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတော့တယ်။
နောက်ဆုံးတကွက်ကြောင့် ၊ ပို လန် သွား အဲ့ ... ပို လန့် သွားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ။
ခွေး အောင်နက်ကြီး နဲ့ ဂုတ်ကျားမ တို့ကိုလည်း တပါတီ ထောင်ပေးပြီး ၊ ကြောင်လို လမ်းလျှောက်သင် ခိုင်းရ ကောင်း မလား လို့ စဉ်းစား နေပါတယ် ။း))
နှစ်သစ်မှာ အထိတ်တလန့် သတင်းတွေ ချည်း ကြားနေရလို့ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်ကြစေ ဖို့တင်ပြပေးလိုက်ခြင်းပါ ။
:kiki : at 4/21/2010 07:28:00 PM
Anonymous said... | Wednesday, April 21, 2010 9:03:00 PM
ရီလိုက်တာ အသံကိုအကျယ်ကြီးနဲ့ မျိုးစုံထွက်လာဒယ်.... :DDDD
chocothazin said... | Wednesday, April 21, 2010 9:17:00 PM
ဘယ်ရမလဲ.. သူတို့ လိုလိုက်လျှောက်လိုက်တယ်။
ahphyulay said... | Wednesday, April 21, 2010 9:23:00 PM
မမကီ တက်လျှောက် ပြ ရင် ပို ကောင်းမယ် လို့။
လျှောက် ပြ မယ် မှုတ် လား .. ဟင် ............။
rose of sharon said... | Wednesday, April 21, 2010 9:38:00 PM
ရီလိုက်ရတာကြည့်ပြီးတော့... ကီကီတို့ကတော့ ရှာရှာဖွေဖွေ တကယ်ဘဲ... အဲလိုလူတွေရှေ့မှာ အလှလျှောက်ရင်း ချော်လဲကြသူတွေ တော်တော်ရှက်သွားကြမှာဘဲနော်...
Flower said... | Wednesday, April 21, 2010 9:58:00 PM
မကိရေးတာကို ဖတ်ပြီး ၂နှစ်ဆက်တိုက် Miss Universe ပြိုင်ပွဲမှာ မယ်အမေရိကတွေ ချော်လဲခဲ့တာကို တွေးပြီး ပြုံးမိသွားတယ်..
မကိဆီ အရင်သင်တန်းတက်ခိုင်းဖို့ မေ့သွားခဲ့ပုံရတယ်..း)
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေနဲ့ စာဖတ်သူကို ပြုံးရယ်အောင် ရေးတတ်တာလေးတွေ သဘောကျမိတယ်..
နှစ်သစ်မှာ အစစ အဆင်ပြေပါစေ အစ်မရေ..
လသာည said... | Wednesday, April 21, 2010 10:17:00 PM
ဟားဟား..တအားရယ်ရတာပဲ။။ မကိကတော့လေ.. ရှာရှာဖွေဖွေ တင်ပြတတ်တာလွန်ရော..။
စူးနှယျလေး said... | Wednesday, April 21, 2010 11:51:00 PM
မြစ်ကျိုးအင်း said... | Thursday, April 22, 2010 12:53:00 AM
ကျနော်လည်း ညာဘက် ဆို တခုခုထစားရင် မီးဖိုခန်းထဲ အသံပေးပြီး ကြောင်လျှောက် လျှောက် ရသေးတယ်
ကြွက်နဲ့ တိုးမှာ စိုးလို့။
ကိုအောင် said... | Thursday, April 22, 2010 1:03:00 AM
ဝက်ဝံလေး said... | Thursday, April 22, 2010 2:08:00 AM
ဖွားကိရယ် ဟားဟားးးးးး လို့ပဲ ရယ်သွားတယ် သိလား ဟိဟိ
မိုးခါး said... | Thursday, April 22, 2010 8:22:00 AM
:D ရုံးမှာ သွားကြည့်မိတယ် .. ဒုက္ခတွေတော့ များကုန်တော့မှာပဲ .. :D
ကာရံဆူး said... | Thursday, April 22, 2010 9:46:00 AM
အစ်မကိကိရေ..ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေ တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ...မကိကိ လျှောက်တဲ့ အလှည့်လဲ ကြည့်ချင်ပါတယ်..
ရွှေရတုမှတ်တမ်း said... | Thursday, April 22, 2010 10:31:00 AM
အင်ကြင်းသန့် said... | Thursday, April 22, 2010 12:02:00 PM
ဟားဟားဟား...ရီလိုက်ရတာ မမကိကိရယ်...အံမယ်...မမကိကိ လျှောက်ထားတဲ့ပုံလည်းရှိတယ်မို့လား...ဟင်းဟင်း သိနေတယ်နော်...
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ said... | Thursday, April 22, 2010 3:56:00 PM
ခုမှပဲ ကြည့်ဖြစ်တော့တယ်.. စာကတော့ မနေ့ညကတဲက ဖတ်ပြီးပါပီ..ရုပ်ရှင်ပါကြည့်မှ ပိုရီရသွားတယ်...
Anonymous said... | Thursday, April 22, 2010 4:04:00 PM
ချစ်သူ ဆုမြတ်မွန် ကို အလိုရှိသည်
ရောက်ရာ အရပ်က ပြန်လာပါ
မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူ ဆံပင်ကောက်သူ အသားညိုသူကို ချစ်တဲ့
Crystal said... | Thursday, April 22, 2010 8:44:00 PM
:P said... | Thursday, April 22, 2010 8:58:00 PM
thanks U. I burst into laugh. LOL>
သုဒြေ္န said... | Thursday, April 22, 2010 11:59:00 PM
ဟုတ်တယ် တကယ်ဘဲ ခုတလောမှာ ရွှေပြည်တော် ကသတင်းတွေဖတ်လိုက်ရင် စိတ်ကို တအားညစ်နေတာ မကိရေးတဲ့ကြောင်လို လျှောက်ကြမယ် ဖတ်တော့ မှ စိတ်သက်သာရာရတော့ တယ်ဗျာ သတိရတိုင်းရီရမဲ့ကြောင်လိုလျှောက်နည်းလေးတွေ ရှာရှာဖွေဖွေစုစည်းတင်ပြတတ်တဲ့ မကိ ကျေးဇူး နော် ရီရလွန်းလို့ ပါ အားပေးတယ်ဗျိုးဒါမျိုးလေးတွေ ဘော်ဘော် သုဒြေ္န
ချစ်ကြည်အေး said... | Friday, April 23, 2010 12:10:00 PM
မကိရေ...ရယ်သွားတယ် သိလား..ခိခိ :)
noblemoe said... | Friday, April 23, 2010 3:00:00 PM
မမရေရုံးမှာကြည့်တော့အသံထွက်ရယ်မိမှာစိုးလို့ မနည်းကိုထိန်းရပါတယ်ရှင်းးးး
Nge Naing said... | Friday, April 23, 2010 5:28:00 PM
ကြောင်လိုလမ်းလျှောက်တာကို လာကြည့်သွားပါတယ်။ မလွယ်ပါလား။
အဖြူရောင်နတ်သမီး said... | Friday, April 23, 2010 5:53:00 PM
SHWE ZIN U said... | Friday, April 23, 2010 6:18:00 PM
ကြောင်လိုတော့ မလျှောက်တတ်သေးဘူး ဒါပေမဲ့ ချစ်ချစ်ကြီး ကတော့ ပြောတယ် တနေ့တခြား ၀က်ကြီးလိုဘဲ အိပက်အိပက် နဲ့တဲ့
ရွှေနတ်သား said... | Monday, April 26, 2010 9:32:00 PM
မကိ..ေ၇းတတ်တယ်ဗျာ..စာလုပ်နေ၇လို့ ညစ်နေတာ.ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့မှ လန်းသွားတယ်
ကိုချစ်ဖေ said... | Friday, April 30, 2010 1:21:00 PM
ဒေါ်ကိကော ခု ဘယ်လိုလျှောက်ပါလိမ့်..
~ဏီလင်းညို~ said... | Saturday, May 01, 2010 9:17:00 AM
Anonymous said... | Sunday, May 09, 2010 9:58:00 PM
[url=http://community.gazzetta.gr/profiles/blogs/consolidate-credit-cards ]consolidate student loan credit cards [/url]consolidate credit cards and personal loans consolidate all my credit cards consolidate credit cards loan
[url=http://www.officialflo.com/profiles/blogs/consolidate-credit-cards ]consolidate loans and credit cards [/url]consolidate credit cards loans law consolidate credit cards consolidate credit cards us
[url=http://community.bonniehunt.com/profiles/blogs/consolidate-credit-cards ]government help to consolidate credit cards [/url]unsecured loan to consolidate credit cards uk consolidate credit cards credit cards to consolidate other debt
Anonymous said... | Wednesday, August 11, 2010 1:28:00 AM